Isku day kale oo Tuuji Sorenson haddii aan shaqayn.
Leeyihiin waayo-aragnimo u cabsi badan la Tuuji Sorenson? Tusaale ahaan, ma aad cadaadin karo file video ah, ama aan u bedeli karaan ama video gubi in qaab la doonayo. Ha welwelin. Halkan waxaad ka heli doonaa kale Tuuji weyn Sorenson inay idinka caawiyaan.
Ugu wanaagsan oo dhan-in-mid video Converter, video hawadda iyo DVD gubi.
Beddelaan videos in ku dhawaad ​​qaab kasta oo kale AVI, MKV, MOV, iwm
Cadaadi videos aan khasaaro tayo kasta oo ay bitrate qabsado, xallinta, heerka jir, iwm
Presets filaayo in telefoonada Android & Apple, Pro Goo Final, iMovie, iwm
Guba video inay DVD la arrimo badan oo menu iyo mawduucyada kala duwan.
Jar, dalagga, darto saamaynta, kor u soo dhalaasho, iwm si aad video u gaar ah.
# 1 Sida loo Isticmaalo Sorenson ku tuuji Alternative
# 2 fursado dheeraad ah: Free Sorenson Tuuji Alternative
# 3 Video Converter Ultimate VS Free Sorenson Tuuji Alternative
# 1: Sida loo Isticmaalo Sorenson ku tuuji Alternative
Tallaabada 1. Import video files galay Video Converter Ultimate
Waxaad kaliya jiidi karaan jeedi file video galay codsigan, ama riix badhanka "Faylal ay dar" on interface ugu weyn.
Edit video: Just riix "Edit" button on video ah laga keeno. Guba Video: riix tab gubatay on menu ugu sareeya → jiidi aad videos galay codsiga → badhanka Gubashada click hoose.
Tallaabada qaab saarka 2. Set
kaliya riix badhanka arrow hoos "Qaabka Output". Waxaad ka arki kartaa waxaa jira dad badan oo qaabab wax soo saarka laga heli karaa. Waxaad riix kartaa Qaabka ama Device icon si ay u doortaan qaabab aad u jeclaystay.
Fadlan riix halkan si aad u hesho video suppored iyo qalab ay taageerayaan .
Tallaabada 3. cadaadi videos (Ikhtiyaar)
Waxaad si fudud u riixi kartaa "Settings" on xaq hoose ee interface ka. Ka dib markii xulashada "Tirada yar", si kale Tuuji Sorenson ku talin doonaa video ku soo koobin kugu habboon. Sidoo kale waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay ula qabsadaan jir video ah, birate sida uu aad u baahan tahay.
Tallaabada 4. Start si loogu badalo
Fadlan riix "Beddelaan" badhanka hoose ee interface ka. Markaas waxaad heli doontaa video ah la gediyay ama ciriiri in dhowr daqiiqo.
# 2: fursado dheeraad ah: Free Sorenson Tuuji Alternative
100% free video Converter si loogu badalo videos ee tayo sare leh.
Free badalo wax ku dhowaad videos aqbasho in qaabab video kala duwan.
Mid ka mid ah click in ay si fudud u cadaadin videos.
Edit videos leh hawlaha video tafatirka classic.
Download YouTube videos xawaare degdeg ah.
Free Sorenson Tuuji Alternative Download Download
Beddelaan caadi video
Beddelaan HD video
Beddelaan video 3D
Beddelaan Lugood bixisay Video
Kaliya 10 beddelaad xaddidaadda lahayn
Media Cope u Mac Alternative: An sida dhaqsaha badan Video Converter All-in-Mid ka mid ah
Movica ma shaqaynta? Hel Movica Best Kale
> Resource > bedelan karo > Sorenson Tuuji aan shaqaynayn? Isku day ay Alternative hadda